नेपालमा युनिभर्सल बैंकिङको अवधारणा - Karobar National Economic Daily
नेपालमा युनिभर्सल बैंकिङको अवधारणा
query_builderJuly 3, 2017 11:26 AM supervisor_accountडा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ visibility2702
हालै नेपालमा युनिभर्सल बैंकिङका बारेमा चर्चा सुरु भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को मौद्रिक नीतिको तर्जुमाका सम्बन्धमा गरिएको छलफल कार्यक्रममा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अब युनिभर्सल बैंकिङतर्फ जानुपर्ने संकेत गरेको छ ।
नेपाल सरकारले लामो समय लगाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले बैंकिङ क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न बैंकिङ प्रणालीलाई युनिभर्सल बैंकिङतर्फ उन्मुख गराउन उपयुक्त संरचनाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले नेपालमा बैंकिङ प्रणाली खण्डीकृत अवस्थामा रहेको र ठूलो संख्यामा स्थापना भएका स–साना बैंकहरूको पुँजीको आधार सानो भएका कारण तिनीहरूले लागत कम गरी बढी मुनाफा आर्जन गर्न नसकेकाले ठूलो मात्रामा दीर्घकालीन अवधिको लगानी आवश्यक पर्ने पूर्वाधार क्षेत्रमा विद्यमान बैंकिङ संरचनाले आवश्यक साधन उपलब्ध गराउन नसकेको उल्लेख गरेको छ । युनिभर्सल बैंकिङले यसलाई समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
के हो त युनिभर्सल बैंकिङ ? यसका फाइदा–बेफाइदा के–के हुन् ? नेपालमा यो कति सान्दर्भिक हुन्छ ? अहिलेको विद्यमान बैंकिङ प्रणालीको भविष्य के हुने ? यो युनिभर्सल बैंकिङ प्रणालीभन्दा कति फरक छ ? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोजिनुपर्छ ।
खास गरी युरोपियन देशहरूमा युनिभर्सल बैंकिङ सफल भएको मानिएको छ । १९ औं शताब्दीमा नै युरोपमा यस प्रकारको बैंकिङ प्रणाली फस्टाएको थियो । भारतमा ९० को दशकमा युनिभर्सल बैंकिङ प्रणालीमा बहस भई केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यसतर्फ गएको देखिन्छ ।
युनिभर्सल बैंकिङ प्रणाली भन्नाले बैंक अथवा वित्तीय संस्थाले सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने प्रणाली हो । निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहका अतिरिक्त सेयर लगानी, बिमा, मर्चेन्ट बैंकिङ, म्युचअल फन्ड, विदेशी विनिमयजस्ता सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार बैंकहरूले गर्न सक्ने प्रणाली नै युनिभर्सल बैंकिङ प्रणाली हो ।
वास्तवमा युनिभर्सल बैंकिङ प्रणालीमा बैंकले वित्तीय उपकरण र वित्तीय सेवाको कारोबारका लागि सुपरमार्केटको काम गर्छ । वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुरा एउटै बैंकबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ, विभिन्न खालका वित्तीय संस्थामा जानु पर्दैन । युनिभर्सल बैंकले कर्जा लगानी मात्र होइन, कम्पनीहरूको सेयरमा समेत लगानी गर्न सक्छ ।
बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्न र कर्जा लिन मात्र होइन, सेयर खरिद गर्ने, बिमा गर्ने र म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने कामसमेत गर्न सकिन्छ । युनिभर्सल बैंकिङ प्रणाली तीन प्रकारको हुन सक्छ ः बैंक स्वयम्ले सम्पूर्ण काम गर्ने, बैंक आफैंले स्थापना गरेका सहायक कम्पनीहरूमार्फत गर्ने अथवा बैंकले होल्डिङ कम्पनीहरूमार्फत गर्ने ।
एकीकृत ढंगबाट सबै वित्तीय कार्य सम्पन्न हुने हुँदा युनिभर्सल बैंकिङका केही फाइदा हुने गर्छ । खास गरी युनिभर्सल बैंकिङमा सबै प्रकारका वित्तीय कारोबार गर्ने हुँदा बैंकको आकार ठूलो हुनुपर्छ । यसले गर्दा इकोनिमिक्स अफ स्केल र स्कोपको फाइदा पुग्छ ।
यसले गर्दा बैंकले कम लागतमा बैंकिङ सुविधा पु¥याउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह अथवा कम ब्याजदर स्प्रेडमा नै वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्न सक्ने ठानिन्छ । युनिभर्सल बैंकिङले गर्दा कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध भएकाले युरोप खास गरी जर्मनीमा औद्योगीकरण हुन सहज भएको थियो भन्ने बुझाइ छ ।
युनिभर्सल बैंकिङ प्रणालीमा बैंकहरूले उद्योगधन्दामा सीधै सेयर (इक्विटी) लगानी गर्न सक्छन् । यसले गर्दा त्यस्ता उद्योगधन्दाको सञ्चालन समितिमा बैंकको प्रतिनिधित्व हुने गर्छ । फलस्वरूप, उद्योगधन्दाहरूको सञ्चालन सफल हुने ठानिन्छ ।
सबै वित्तीय कारोबार गर्ने हुँदा युनिभर्सल बैंकिङमा कारोबार खर्च कम हुने हुँदा उपभोक्ताहरूले सस्तो लागतमा वित्तीय सेवा पाउन सक्छन् । निभर्सल बैंकिङमा बैंकहरूको ठूलो नेटवर्क र ब्रान्ड मूल्यले गर्दा सस्तोमा साधन परिचालन गरी सस्तोमा वित्तीय सेवा तथा उपकरणहरू उपलब्ध हुन सक्छन् ।
युनिभर्सल बैंकिङ प्रणालीमा बैंकहरू ठूला आकारका हुने र विविध कार्य गर्ने हुँदा आन्तरिक र बाह्य प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्ने मान्यता राखिन्छ । हकहरूलाई एकै ठाउँबाट विविध प्रकारका वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने हुँदा सबै प्रकारका वित्तीय सेवामा मानिसहरूको वित्तीय पहुँच पुग्न सक्छ । विभिन्न खालका वित्तीय कारोबार गर्ने हुनाले युनिभर्सल बैंकिङ प्रणालीमा जोखिमको विविधीकरण हुन जान्छ । यसले गर्दा वित्तीय स्थिरता कायम गर्न सहज हुने ठानिन्छ ।
युनिभर्सल बैंकिङका नकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । बैंकहरूले सम्पूर्ण वित्तीय कारोबारमा संलग्न हुने हँुदा एकाधिकार सिर्जना हुने भई बजार प्रतिस्पर्धी नहुन सक्छ । युनिभर्सल बैंकिङ प्रणालीमा बैंकहरूले सबै वित्तीय कार्य गर्ने हुनाले ग्राहकहरूले विशिष्टीकृत सेवा पाउन सक्दैनन्, जसले गर्दा चाहेजस्तो र उपयुक्त वित्तीय उपकरणहरू खरिद गर्नबाट वञ्चित हुन सक्ने हुन्छ । सबै कार्य गर्दा कुनै पनि कार्यमा बैंकहरू विशिष्टीकृत बन्न सक्दैनन् । युनिभर्सल बैंकिङ प्रणालीमा साना–साना वित्तीय संस्थाहरू टिक्न कठिन हुन सक्छ ।
युनिभर्सल बैंकिङ प्रणालीमा बैंकिङ संस्थाहरूले सबै खाले वित्तीय सेवा दिने हुँदा कुनै कारणले उक्त वित्तीय संस्थामा समस्या आयो भने सम्पूर्ण खालका वित्तीय सेवाको प्रवाहमा समस्या आउने हुन्छ । हुन त युनिभर्सल बैंकिङमा संस्थाहरू असफल हुन नसक्ने गरी ठूला बन्छन् भन्ने मान्यता पनि राखिन्छ ।
नेपालको जस्तो सानो बजारमा साना–साना धेरै संस्था सञ्चालन रहन सम्भाव्य हुने देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपालमा युनिभर्सल बैंकिङको औचित्यता देखिन्छ । विभिन्न खालको वित्तीय सेवा र उपकरणहरूको पहुँच बढाउन पनि युनिभर्सल बैंकिङ प्रणाली उपयोगी हुन सक्छ । तर, सबै काम एउटै बैंकले गर्दा नियमन गर्न कठिन हुने र बैंकले गर्ने कामहरूको नियमन विभिन्न निकायबाट गर्नुपर्ने हुँदा बलियो समन्वयको खाँचो पर्छ ।
एउटै संस्थाबाट सबै काम गर्दा जोखिम व्यवस्थापन सक्षम ढंगबाट नहुने अवस्था पनि हुन्छ । वाणिज्य बैंकहरूले लगानी बैंकको काम गर्दा नै संयुक्त राज्य अमेरिकामा २००७÷०८ मा वित्तीय संकट आउन सहयोग पुगेको थियो । सबै क्षेत्रमा हात हालेको अवस्थामा एउटा सानो क्षेत्रमा समस्या आएमा ठूलै संस्था पनि टाट पल्टिन सक्ने उदाहरण अमेरिकाको वित्तीय संकटले देखाएको छ ।
अहिले पनि नेपालका बैंकिङ प्रणालीमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने काम धेरै हदसम्म समान रहेको छ । धेरै बैंकहरूले सहायक कम्पनीहरूमार्फत धितोपत्र बजारको काम गर्न थालेका छन् । अहिलेसम्म बिमाको काम गर्ने छुट्टै बिमा कम्पनीहरू रहेका छन् । बैंकको इन्स्योरेन्सको कार्य सुरु हुन बाँकी छ । युनिभर्सल बैंकिङ प्रणाली बिमाको काम पनि बैंकहरूले गर्ने अवस्था आउँछ ।
बिमा कम्पनीहरूका लागि थप प्रतिपस्र्धा सिर्जना हुने देखिन्छ । अर्कातर्फ निश्चित सीमासम्म मात्र अहिले बैंकहरूले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको सेयर खरिद गर्न सक्छन् । कर्जा दिएझैं निजी कम्पनीहरूको सेयर किन्न सक्ने प्रावधान अहिले छैन ।
युनिभर्सल बैंकिङ प्रणाली अवलम्बन गरिएमा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कम ब्याजदरमा कर्जा अथवा बैंकहरूले उत्पादनमूलक संस्थाहरूमा सेयर लगानी गरे भने नेपालमा औद्योगीकरण गर्न सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, केही समयका लागि केही सीमित बैंकलाई मात्र युनिभर्सल बैंकिङको कार्य गर्न दिई अन्य विशिष्टीकृत संस्थाहरूलाई पनि समानान्तर ढंगबाट सञ्चालन हुने मौका दिनुपर्ने भने देखिन्छ ।
युनिभर्सल प्रणालीमा जाने हो भने सोहीअनुरूप नियमन र सुपरिवेक्षणलाई परिष्कृत पार्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, नियामक निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता पनि पर्छ ।
(नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक श्रेष्ठका यी विचार निजी हुन् ।)
बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकिङ युनिभर्सल बैंकिङ प्रणाली